पत्नीलाई दाउमा राखेर जुवा ! जित्ने दुईजनाले गरे सामूहिक बलात्कार – Everest Dainik – News from Nepal
पत्नीलाई दाउमा राखेर जुवा ! जित्ने दुईजनाले गरे सामूहिक बलात्कार
भारत इन्दौर, असार २९ । भारतमा एउटा अनौठो घटना प्रकाशमा आएको छ । जुवामा नगद गुमाइसकेका एकजनाले पत्नीलाई नै दाउमा राखेर जुवा खेलेको र जित्ने कथित दुई जनाले घर मै गएर महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको घटना प्रकाशमा आएको हो ।
इन्दौरको प्रहरी उपमहानिरीक्षक कार्यालयमै आयोजित कार्यक्रममा महिले आफ्नो पीडा सुनाएपछि प्रहरीले सो घटनाको छानविन थालेको छ ।
इन्दौरको पूर्वी क्षेत्रका प्रहरी प्रमुखले सम्बन्धित प्रहरी थानालाई छानविनको जिम्मेवारी दिइएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएका छन् ।
ट्याग्स: Group rape, India